Qof kastaa inuu iska ilaaliyo inuu dhex joogo bay'ada gudaha dhismayaasha ee ay jirto halista saxmad ku imaan karto sida tusaale ahaan dukaamada iyo xarumaha laga adeegto. Booqashooyinka daruuriga ah ee tusaale ahaan lagu tagaayo dukaamada raashinka iyo farmashiiyaha ayaa la sameyn karaa. Ka fogow bay'adaha iyo goobaha ay dad badani hal mar wada joogaan. Ka feker wax bedelka tabobarka jimicsiga ah ee aad sameyn karto si looga fogaado ciriiriga badan, tusaale ahaan goobaha isboortiga, jimicsiyada iyo goobaha/barkada dabaasha.
Qof kastaa inuu iska ilaaliyo inuu la sheekeysto dadka kale ee aan ahayn kuwa uu la degan yahay ama uu todobaad kasta la kulmo. Ka fogow qabashada ama ka qeybgalida xafladaha iyo munaasabadaha kale ee gaarka ah. In lala kulmo dadka ka baxsan kuwa aad la nooshahay ama aad sida joogtada ah ula kulanto ayaa sii kordhinaysa khatarta fayruska.
Qof kastaa waa inuu iska ilaaliyo safarka gaadiidka wadweynaha ama gaadiidka dadweynaha ee kale ee lagu safro. Safarada aan la iska ilaalin karin, tusaale ahaan safarada lagu tagaayo shaqada, dugsiga ama booqashada daryeelka caafimaadka, ayaa markasta la sameyn karaa. Ka qeybqaado yareynta saxmada gaadiidka dadweynaha si kuwa u baahan ugu safraan oo aan haysan fursado kale ay si ammaan ah ugu safri karaan. Masaafad u jirso, qadarin sii/u muuji oo dadka kale u oggolow inay horta ka soo dagaan intaadan adigu fuulin.
Qof kasta oo 15 sanno jir ka weyn waxa lagala taliyaa sameynta waxqabadyda isboortiga. Waxa ka reeban ciyaartoyga xirfadleyda ah iyo ardeyda dhigata dugsiga sare ee isboortiga. Qof walba, iyadoo aan da'da loo eegayin, waxa lagala talinayaa inuu qabanqaabiyo/abaabulo ama ka qeybgalo tartamada isboortiga iyo koobabka halkaas oo ay dad badani ku kulmayaan iyo halkaas oo safaradu lagama maarmaan yihiin.
Dhammaan waxqabadyadu waa inay qaadaan tallaabooyin si loogu yareeyo tirada soo booqdayaasha ah ee isla waqti joogta, lagu beego saacadaha furitaanka oo la soo bandhigo fursadaha waxqabadka dhijitaalka ah. Ka qeybqaado si aanay saxmadi ugu imaanin. Ka fogow abaabulka waxqabadyo keenaaya in dad badani isku soo ururaan.
Loo shaqeeyahu waa in bixiyaan fursadaha/shuruudaha oo uu shaqaalahana ku dhiirrigeliyaa inay guriga ka soo shaqeeyaan marka ay taasi suurtogal tahay. Safarada shaqaqu dadka meel u dirto, shirarka iyo kulamada kale ee tooska ah/jidh ahaaneed waa in laga fogaadaa.